शनिबारदेखि आइपीएलः सन्दीपले दिल्ली क्यापिटलबाट पहिलो खेलमा अवसर पाउने सम्भावना कति ? - PuraKhabar
शनिबारदेखि आइपीएलः सन्दीपले दिल्ली क्यापिटलबाट पहिलो खेलमा अवसर पाउने सम्भावना कति ?
March 21, 2019 March 21, 2019 Purakhabar News
भारतको विश्व चर्चित क्रिकेट लिग इण्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल) शनिबारबाट शुरु हुँदैछ । पहिलो खेल पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिं धोनीको कप्तानीमा रहेको टीम चेन्नई सुपरकिङ र भारतीय कप्तान विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको टीम रोयल च्यालेञ्जर बैंगलोरबीच हुने छ ।
भारतको आईपील यस अर्थमा पनि विश्वमा प्रख्यात छ जहाँ विश्वका प्रायः सवै क्रिकेट खेल्ने राष्ट्रका राम्रा खेलाडीहरुले खेल्ने गर्दछन् । दिल्लीको दिल्ली क्यापिटलबाट नेपालका स्पीनर सन्दीप लामिछाने पनि खेल्दैछन् । गत सिजनमा अन्तिम ३ खेलमात्र खेल्ने अवसर पाएका सन्दीपले ५ विकेट लिएका थिए । यो सिजन उनलाई शुरु देखि नै सवै खेल खेलाउने सम्भावना भए पनि टीममा अन्य राम्रा र नाम चलेका स्पीनर भएको कारण अझै पनि उनलाई सवै खेल खेलाउनेमा सन्देह नै छ ।
दिल्लीको खेल भने आईतबार नेपाली समय अनुसार ८ः१५ मा मुम्बई इण्डियन्स मुम्बई रहेको छ । टीममा विश्वका राम्रा राम्रा बलरहरु रहेका छन् । भारतीय युवा ब्याट्समेन श्रेयस आयरको कप्तानीमा रहेको टिममा विश्व क्रिकेटका तेज गतिका वलर ट्रेड वोल्ड, कंगिरो रवडा, इशान शर्मा जस्ता वलर रहेका छन् भने स्पीनरमा नेपालका सन्दीप लामिछाने, भारतीय स्पीनर अमित मिश्रा, जयन्त यादव राहुल टेवाटीय आदि रहेका छन् । उता अलराउण्डरमा साउथ अफ्रिका क्रिस मोरेस, इण्डियन अलराउण्डर अक्षर पटेल रहेका छन् । गत सिजनमा सन्दीपको ठाउँमा खेलिरहेका अष्ट्रेलियन खेलाडी ग्रेन म्याक्सोयल यसवर्ष उपलव्ध छैनन् । यस अर्थमा सन्दीपलाई दिल्ली टीम व्यवस्थापनले सुरुदेखि नै खेलाउने सम्भावना देखिएको छ ।
पहिले जस्तै अमित मिश्रा लगातार फेल भएमा सन्दीपलाई सवै खेल खेलाउन सक्छन् । सन्दीपले विदेशी भूमिमा धेरै टि–ट्वान्टी लिग खेलेको अनुभवको कारण उनलाई पहिलो खेल बाटनै खेलाउन पनि सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । यसो गरेमा सन्दीपलाई आफ्नो जादु देखाउन सजिलो हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ तर मुम्बईको पिचमा स्पीनरको जादु नचल्न पनि सक्छ उनलाई अवसरसंगै चुनौती पनि छ । मुम्बईमा कप्तान रोहित शर्मा, क्युटन डिकक्, इशन किशन जस्ता विष्फोटक व्याट्समेन रहेका छन् र हार्दिक पाण्डेय, करेन पोलाड, कुनाल पाण्डेय जस्ता लामा लामा छक्का लगाउने अलराउण्डर रहेका छन् । उनीहरु स्पीनरका माहिर खेलाडीहरु हुन ।
यदि चारजना बलरका साथमा दिल्ली उत्रिएमा पनि उसले दुइजना विदेशी वलर खेलाउने छ जुन वलरहरु ट्रड वोल्ट र कंगिसो रवडाले विश्व क्रिकेटमा सनसनी मचाई रहेका भए पनि दूई तीव्र गतिका बलरमा एकजना मात्र खेलाउन सक्नेछ । दुवै जना तीब्र गतिका वलर भएकाले स्पीनरकोरुपमा सन्दीपलाई लिएर मैदानमा उत्रन सक्ने छ । अन्य तीब्र गतिका भारतीय बलर खेलाउन सक्ने छ ।
सम्भावित प्लेइङ लेभेनः क्लीन मुन्रो, पृथ्वी शाँ, शिखर धमन, श्रेयस आयर, कोलिन इन्ग्राम, ऋषव पन्त (विक), अक्षर पटेल, सन्दीप लामिछाने/अमित मिश्रा, कंगिसो रबडा/अवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, ईशांत शर्माका साथमा उत्रन सक्छ । अवेश खानलाई खेलाएमा अमित मिश्रालाई हटाएर सन्दीप लामिछानेलाई खेलाउने छ । अमित मिश्रा लगातार फ्लप भईरहेका छन् जस्को कारण पनि सन्दीपले खेल्ने सम्भावना रहेको छ ।
गत संस्करणमा अलराउण्डर ग्रेन म्याक्सोयल खेलेकाले सन्दिपले अन्तिम तीन खेलमात्र खेल अहिलेको संस्करणमा म्याक्सोयल छैनन् उनको ठाउमा भारतीय अलराण्डर अक्षर पटेल खेल्ने भएकाले पनि क्यापिटलले ४जना विदेशी खेलाडीमा सन्दिपलाई अटाउन सक्ने छ ।
दि आर्ट ऑफ लिभिङ्ग बुटवल ले मनायो हर्ष उल्लासका साथ होलि